Mahajanga: Ravan’ny Polisy ny fikamban-jiolahy iray
jeudi, 11 janvier 2018 14:42
Tra-tehaka tany Marovoay omaly ny roa tamin'ireo jiolahy ireo raha tratra teny Mangarivotra Mahajanga ny andron'ny fanafihana kosa ny iray rehefa nifanenjehan'ny Polisy.
Raha tsiahivina, ny 08 janoary lasa teo teny Mahajanga Be no nandroban'izy ireo vola mitentina 30 tapitrisa Ariary nentina lehilahy iray nitondra moto. Narahin'ireo jiolahy tamin'ny moto ilay lehilahy ary novelesina maritoa, araka ny hita eo amin'ny sary, ity farany, avy eo nalain'izy ireo ny vola tamin'ny sakaosy.
Sendra polisy mpanao fisafoana anefa ny zava-nitranga, ny andro rahateo mbola tamin'ny dimy ora hariva. Raikitra ny fifanenjehana saingy ny iray tamin'ireo efa-dahy ihany no voasambotra io andro io. Nitohy hatrany Marovoay ny fisamborana.
Efa raindahiny amin'ny asan-jiolahy ireto andian'olona ireto satria nandritra ny famotorana natao dia mbola niaiky izy ireo fa tompon'antoka tamin'ny fanafihana teratany karana teo Mahajanga Be ihany koa ny volana oktobra 2017.
Olona miisa dimy, no voasambotra ary natolotra ny Fampanoavana androany. Mbola karohina kosa ny iray naman'izy ireo.